गण परिवर्तनपछि गैंडा सिकारी सक्रिय, अनुसन्धान गर्ने सीआईबी टोली आयो – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
गण परिवर्तनपछि गैंडा सिकारी सक्रिय, अनुसन्धान गर्ने सीआईबी टोली आयो
२०७१ बैशाख २१, आईतवार ०२:२२ गते
कसरा । निकुञ्जभित्र तैनाथ सेनाको गण र गुल्म परिवर्तन भएलगत्तै चितवनमा गैंडा सिकार सुरू भएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा तस्करले गोली हानेर गैंडा मारेपछि घटनामा संलग्नहरुको खोजी गर्न काठमाडौंबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) को टोली नै चितवन आएको छ ।
विसं. २०६९ सालको फागुन ५ गतेयता चितवन निकुञ्जमा चोरी सिकारीका कारण गैंडा मारेको यो पहिलो घटना हो । विसं. २०७० सालभर चोरी सिकारीले गैंडा नमारेको भनेर चितवन निकुञ्जले केही दिन अघिमात्रै वनमन्त्री ल्याएर सौराहामा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र धुवा र सुखिभारको बीचमा मध्यरातमा गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो । सेनाको टोली तत्कालै खोजतलासमा गए पनि शनिबार बिहान निकुञ्जभन्दा बाहिर जगतपुर गाविसको वडा नं. २ र ७ को सिमाना मध्यवर्ती क्षेत्रमा खागविहीन मरेको गैंडा फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी तथा सहायक संरक्षण अधिकृत टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र फेला परेको मृत गैंडा आन्दाजी २५ वर्षको भाले भएको निकुञ्जले शनिबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गैंडाको पोष्टमार्टम गर्दा आँखा र कानको बीचमा थ्री नट थ्री बन्दुकको गोली फेला परेको निकुञ्जले जनाएको छ । घटनास्थलमा बञ्चरो र त्योभन्दा केही पर थ्री नट थ्रीका पाँच गोली पनि भेटिएका छन् । चितवन निकुञ्जका सुरक्षाका लागि एउटा गण र एउटा गुल्ममा गरेर झण्डै ११ सय नेपाली सेना खटेको छ ।
तीन वर्षदेखि तैनाथ गण र गुल्म छ दिनअघि मात्रै परिवर्तन भएका हुन् । निकुञ्जको चितवन र मकवानपुर खण्डमा तैनाथ नन्दाबक्स गणको सट्टा श्रीजंग गणले हाल त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था समालेको छ । त्यस्तै, नवलपरासी क्षेत्रमा तैनाथ रण दल गुल्म पनि परिवर्तन भएको छ ।
मध्यरातमा निकुञ्जभित्र पसेर गोली चलाएको घटना यसअघि भएको थिएन । चोरी सिकारीहरुले सुरक्षाकर्मीहरु नयाँ आएको मौका छोपेर सक्रियता बढाएको घटनाक्रमले देखाएको छ । केही दिनयता निकुञ्जनजिकका सामुदायिक वनहरुमा पनि गैंडा मार्ने धराप र बन्दुकहरु बरामद भएका थिए । सुरक्षा सक्रियता नबढ्ने हो भने यो बेला गैंडा थप जोखिममा रहेको भन्दै संरक्षणकर्मीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
केही दिनअघि मंगलपुरको सेतीदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बन्दुक र गोली समेत बरामद भएको थियो । नयाँ गण र गुल्मले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने आँकलन गरेर तस्करहरु सक्रिय बन्ने खतरा रहन्छ । पुरानो गण र गुल्मका सवै सुरक्षाकर्मी बिदा हुनुभन्दा तीन चार महिना अघिदेखि नयाँ गण र गुल्मका सुरक्षाकर्मीहरु आएर निकुञ्जको माहौल र सुरक्षा अवस्थावाबारे घुलमिल हुने परिपाटी रहेको हुन्छ ।
‘सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त हुँदाहुँदै पनि दुखद घटना भयो । अब अझै सक्रियताका साथ लाग्छाँैं’ सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी पौडेलले भने । निकुञ्जमा सुरक्षा अवस्था कमजोर हुँदा वा निकुञ्ज प्रमुख र सुरक्षा निकाय परिवर्तन हुँदा तस्करहरु सक्रिय हुने गरेको घटना छन् । यसअघि २६ महिना पहिले गैंडा मर्दा निकुञ्जका प्रमुखहरु चाँडो चाँडो परिवर्तन भएको अवस्था थियो ।
तस्करहरुले खागका लागि निकुञ्ज वरपर बस्नेहरुलाई प्रयोग गरेर गैंडा मार्न लगाउने गरेको भेटिएको छ । गैंडा मारेमा वा त्यसको अंगको कारोबार गरेमा ५० हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिबाना वा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद अथवा जरिबाना र कैद दुवै हुने कडा कानुनी प्रावधान छ । तर यो कानुनी प्रावधानबाट बेखबर स्थानीयलाई उक्साएर तस्करहरुले गैंडा मार्न लगाउने गरेका छन् ।